အလေးချိန်စက် Check စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှု, တရုတ်နိုင်ငံ, စက်များပေးသွင်းအလေးချိန်မှာ Automatic စစ်ဆေးမှု
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှု
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှု ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှု, အလေးချိန်စစ်ဆေးမှုစက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အလိုအလျောက်စစ်ဆေးမှုအလေးချိန်စက်များ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်လက်ကျန်ငွေ (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်စစ်ဆေးမှုများအလေးချိန်စက် (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စနစ်များအလေးချိန် inline စစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mettler toledo checkweigher (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရွေ့လျားမှု checkweigher (MS-CW018) တွင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလေးချိန်စကေးစက် (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်အလေးချိန်စက် (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်စကေး (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဒစ်ဂျစ်တယ်အလေးချိန်စက် (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်စက် (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလေးချိန်စက်အွန်လိုင်း (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
weigher စက် (MS-CW2018) Check  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Supply နိုင်ခြင်း: 100 units per month
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်ချိန်ခွင်လျှာ အွန်လိုင်းစက်အလေးချိန် ဒီဂျစ်တယ်အလေးချိန်စက် ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ဆေးပညာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ပေါ်ကိုခါးပတ်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector ။...
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အွန်လိုင်းစက်စစ်ဆေးနေအလေးချိန်, စနစ်များ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုမီတာ, ocs checkweighers အလေးချိန် inline စစ်ဆေးမှုများ။ ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ဆေးပညာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector,...
စနစ်များအလေးချိန် inline စစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018)
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) စက်အွန်လိုင်းစနစ်များအလေးချိန် inline စစ်ဆေးမှုများ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုမီတာစစ်ဆေးနေအလေးချိန် ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ဆေးပညာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector,...
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အလေးချိန်စကေးစက်, အင်လိုင်းပေါ်ကိုစကေး mettler toledo checkweigher လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစက်အလေးချိန်စစ်ဆေးမှု, အလေးချိန်စက် Check, အလိုအလျောက်စစ်ဆေးမှုအလေးချိန်စက်များ။ ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု...
ရွေ့လျားမှု checkweigher (MS-CW018) တွင်
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) ရွေ့လျားမှု checkweigher အတွက်အလေးချိန်စကေးစက်, အင်လိုင်းပေါ်ကိုစကေး, ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ဆေးပညာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ပေါ်ကိုခါးပတ်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector ။ Model...
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အလေးချိန်စကေးစက်, အင်လိုင်းပေါ်ကိုစကေး, စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှု, အလေးချိန်စက် Check, အလိုအလျောက်စစ်ဆေးမှုအလေးချိန်စက်များ။ ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector,...
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အလေးချိန်အွန်လိုင်းစက်စစ်ဆေးနေ အွန်လိုင်းစက်အလေးချိန် hi မြန်နှုန်း checkweigher ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ဆေးပညာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ပေါ်ကိုခါးပတ်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector,...
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အလေးချိန်အွန်လိုင်းစက်စစ်ဆေးနေ အွန်လိုင်းစက်အလေးချိန် အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်စကေး ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ဆေးပညာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ပေါ်ကိုခါးပတ်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector ။...
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အလေးချိန်အွန်လိုင်းစက်စစ်ဆေးနေ အွန်လိုင်းစက်အလေးချိန် ဒီဂျစ်တယ်အလေးချိန်စက် ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ဆေးပညာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ပေါ်ကိုခါးပတ်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector ။...
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အလေးချိန်အွန်လိုင်းစက်စစ်ဆေးနေ checkweigher အီလက်ထရောနစ်စကေး ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ဆေးပညာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ပေါ်ကိုခါးပတ်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector ။ Model FLCW-L-8Kg...
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အလေးချိန်အွန်လိုင်းစက်စစ်ဆေးနေ အွန်လိုင်းစက်အလေးချိန် စက်မှုဇုန်အလေးချိန်ချိန်ခွင် ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ဆေးပညာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ပေါ်ကိုခါးပတ်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector...
weigher စက် (MS-CW2018) Check
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အွန်လိုင်းစက်စစ်ဆေးနေအလေးချိန်, checkweigher လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစက်အလေးချိန်စစ်ဆေးမှု, အလေးချိန်စက် Check, အလိုအလျောက်စစ်ဆေးမှုအလေးချိန်စက်များ။ ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector,...
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှုများ (MS-CW2018) အလေးချိန်အွန်လိုင်းစနစ်, တရုတ်အတွက်စက်များပေးသွင်းအလေးချိန်မှာ Automatic စစ်ဆေးမှုအလေးချိန်, အွန်လိုင်းစက်စစ်ဆေးနေ။ ပေါ်ကိုစားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector, ဆေးပညာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသတ္တု Detector,...
တရုတ်နိုင်ငံ စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှု ပေးသွင်း
1. ဒီစက်ဆူညံသံများနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်များ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချဖို့ subwoofer မော်တာနှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနိမ့်ဆူညံသံဟာဂီယာအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်၏ဝက်ဝံချမှတ်။
2. လျှပ်စစ်သံလိုက်နဲ့ဓါတ်ကင်ခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုကာကွယ်တားဆီး, ဒီစက်ကိုလျှပ်စစ်သံလိုက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုထံမှအန္တရာယ်နှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကာကှယျပေးဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဒိုင်းကာပစ္စည်းများချမှတ်။
3. အသုံးပြုသူဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကိုအဖြစ်မြင့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေးပါ။
4. သယ်ဆောင်မှုစနစ် brushless မော်တာများနှင့်ပေါ်ကိုခါးပတ်၏ရေးစပ်ခဲ့သည်။ Brushless မော်တာမောင်းသူ module ကိုမြင့်မားတဲ့လိမ်အားမြင့်မားတိ, drive ကို၏ကျယ်ပြန့်မြန်နှုန်းအကွာအဝေး, ပစ္စည်းများ၏ယူနီဖောင်းရွေ့လျားမှုသဘောပေါက်ထားပါတယ်အတူမော်တာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်အလေးချိန်ယူနစ်ပိုပြီးတိကျစွာပစ္စည်းအလေးချိန်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
5. အလေးချိန်စနစ်ကယူနစ်အလေးချိန်အဓိကအလေးချိန်ယူနစ်နှင့်တုန်ခါမှုများကရေးစပ်ခဲ့သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်စစ်ဆေးမှုများ weigher အဘို့အပြင်ပကမ္ဘာကြောင့်တုန်ခါမှုတားဆီးဖို့တုန်ခါမှုအလေးချိန်ယူနစ်အတွက်ထားပါ။ အလေးချိန်နှင့်တုန်ခါမှုယူနစ်အာရုံခံအလေးချိန်မြန်နှုန်းမြင့်မြင့်မားတဲ့အထိခိုက်မခံ, မြင့်တိကျစွာချမှတ်သည်ကုန်ပစ္စည်းများပြီးနောက်ထို့နောက်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသထားသောတစ်ခုတည်း chip ကို microcomputer နှငျ့ဆကျသှယျ, ထိုအာရုံခံကိရိယာမှတစ်ဆင့်မော်ကျူးအလေးချိန်အားဖြင့်လျှပ်စစ်အချက်ပြသို့လှည့်သတင်းအချက်အလက်ကောင်တာအတင်းပါလိမ့်မယ်။
စက်အလေးချိန်လျှပ်စစ်ပေါ်ကိုစစ်ဆေးမှု အလေးချိန်စစ်ဆေးမှုစက် အလိုအလျောက်စစ်ဆေးမှုအလေးချိန်စက်များ အွန်လိုင်းအလေးချိန်စနစ် လေဆိပ်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုစက်